विवश वस्ती शुक्रवार, आश्विन ६, २०७४
दुई ठूलो पर्व जस्केलोमै उभिएको छ । दशैं र तिहारको रौनक सर्वत्र छाउन थालिसकेको छ । अब ती पर्व नेपालीहरूका दैलोबाट भित्रै छिर्नेछन् । सबैलाई थाहा नै छ, दशैं र तिहारजस्ता पर्व सबैले गच्छेअनुसार मनाउने गर्छन् । पर्वप्रेमी नेपालीहरूले गच्छेअनुसार नै भोजभतेर लगाउँछन्, गच्छेअनुसार नै दानदक्षिणा अर्पण गर्छन् र गच्छेअनुसार नै खुशी र उल्लासमा रमाउँछन् । अर्थात्, जसको जे जस्तो गच्छे छ, त्यहीअनुरूप नै चाडपर्वलाई उल्लासपूर्ण तरिकाले मनाएर बिदावारी गर्छन् ।
चाडपर्व मनाउने कुरामा मात्र होइन, अरू पक्षमा पनि गच्छेअनुसारका काम–कुरा हुँदा रहेछन् । अहिलेको ताजा विश्व राजनीतिलाई नै हेरौं न । उत्तर कोरियाले दिनहुँजसो क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिकाजस्ता देशलाई तर्साइरहेको छ । लाग्छ, उत्तर कोरियाले ती देशलाई आफ्नो गच्छेअनुसार नै तर्साइरहेको छ । विश्व शान्तिका निम्ति घामड देखिएको उत्तर कोरियाले कति वेला कहाँ क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने हो ? अरू देशहरूलाई त्राहीत्राही बनाइरहेको छ ।
उत्तर कोरियाको पारा देखेर जापान, अमेरिका र दक्षिण कोरिया चकित मात्र परेका छैनन्, ती देशले उत्तर कोरियालाई आ–आफ्नो गच्छेअनुसार नै लल्कारिरहेका छन्, दुत्कारिरहेका छन् र नाकाबन्दी लगाएरै गलाउने ध्वाँस दिइरहेका छन् । उत्तर कोरियाको ताल देखेर चीनले पनि गच्छेअनुसार वक्तव्यहरू निकालिरहेको छ, रुसलगायत देशहरू पनि गच्छेअनुसार नै बोलिरहेका छन् । विश्व शान्ति नराम्ररी बिथोलिने भो भन्ने त्रासले सबैलाई अँठ्याइरहेको छ ।
यो त विश्व परिवेशको कुरा भयो । हाम्रै देशको कुरा गरौं । हामीले स्थानीय तहको चुनावलाई तीन–तीन चरणमा निप्ट्यायौँ । कहिले कसको असन्तुष्टिलाई पुर्नुपर्ने, कहिले कसको तिगडमलाई काँध थाप्नुपर्ने र कहिले कसको मनोकांक्षालाई टेको लगाउनुपर्ने आदि कारणले एकै चरणमा हुने चुनावले तीन–तीन चरण पार गर्‍यो । तर, सबै चरणका चुनावमा गच्छेअनुसारकै कामहरू भए । जनताले कुनै दललाई धेरै तहमा जिताए, कसैलाई कममा खुम्च्याए । लाग्छ, अब जनता बाठा भइसके । उनीहरूले पार्टीहरूलाई गच्छेअनुसार नै भोट दिए ।
कुन पार्टीको गच्छे कति छ, कुन पार्टीको कति छ ? सबै तौलेर, जोखेर र मोलमोलाई गरेर जनताले पार्टीहरूलाई भोट दिए । पार्टीहरूले पनि गच्छेअनुसार नै भोट पाएको ठान्नुपर्छ । थोरै तहमा जित्ने पार्टीले धेरै तहमा जित्ने पार्टीतिर हेरेर मुन्टो बटार्नु उचित हुँदैन र धेरै तहमा जित्ने पार्टीले थोरै तहमा जित्नेलाई खिस्याउनु पनि जरुरी देखिँदैन । किनकि, जनताले पार्टीहरूको गच्छे हेरेर नै भोट दिएका हुँदा चित्त बुझाउन करै लाग्छ ।सबैले आ–आफ्नो गच्छेअनुसार चल्नुपर्छ । गच्छेअनुसार चल्ने हो भने कोही पनि भड्खालोमा पर्दैनन् ।
गच्छेअनुसार घुस नलिँदा धेरै कर्मचारी फन्दामा परेका छन् । गच्छेअनुसार सामानको भाउ नतोक्दा धेरै कालाबजारीहरू कारबाहीको दायरामा तानिएका छन् । गच्छेअनुसार गाडीको भाडा नलिँदा गाडी व्यवसायीहरू ट्राफिकको फेला परेका छन् । गच्छेअनुसार सुनको तस्करी नगरेका हुँदा धेरै तस्कर भागाभाग भएका छन् । गच्छेअनुसार चुनावका वेला मतदाताहरूलाई गुलिया आश्वासन नबाँडेका कारण अहिले त्यसलाई पूरा गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिहरू लाजले मुख छोप्न बाध्य छन् । गच्छेअनुसार सडक पिच नगरेर भत्किएका कारण ठेकेदारहरू ‘ठगदार’ मा परिणत हुँदै गएका छन् । तसर्थ, सबैले गच्छेअनुसार गरौं, गच्छेलाई पछ्याऔँ ।